Iingcebiso malunga neentlanzi zakho ukuhlala ixesha elide | Ngeentlanzi
Izolo, sichazile ezinye amaqhinga kunye namanyathelo ekufuneka uwalandele ukwenza ukuba intlanzi yegolide yakho ihlale ixesha elide Kwitanki lakho leentlanzi. Ukongeza kutshintsho lwamanzi ngamaxesha athile, ukuqinisekisa ukuba siwanika ukutya okwaneleyo kwaye iimeko ze-aquarium zezona zilungileyo, kubalulekile ukuba sibe neengcebiso ezithile zokongeza ubomi besilwanyana.
Kungenxa yesi sizathu, ukuba namhlanje, sikuzisele iingcebiso ezinokuba luncedo kakhulu xa kuziwa unentlanzi yegolide kwitanki lakho leentlanzi, kwanalo naluphi na olunye uhlobo lwentlanzi. Bakhumbule nje kwaye ubavavanye.
Into yokuqala esifuna ukuyithetha kuwe namhlanje kukubaluleka kwe- izityalo echibini lethu. Kubalulekile ukuba ukhumbule ukuba, nokuba uneefilitha zetekhnoloji yamva nje, okanye eyona ibiza kakhulu, ezona zihluzi ze-aquarium ziya kuhlala zizizityalo, ke ngoko ndincoma ukuba ujonge uhlobo lwezityalo ezinokusetyenziselwa beka echibini lakho. Kwangokunjalo, kubaluleke kakhulu ukuba uhlale ucinga nantoni na enokwenzeka echibini lakho, umzekelo, wenzeni xa kunokubakho itanki, okanye ukuba i-aquarium iyaphuka, kwangaxeshanye ucinga ngeyona ndawo intle Ukubeka oko kwimeko yengozi owona monakalo mncinci unokubangelwa.
Ngaphandle kwesizathu, kuya kufuneka uyishiye i- izibane zetanki Ngaphezulu kweeyure ezimbalwa ngosuku. Oku, ukongeza ekubeni kubiza kakhulu kwinkcitho yamandla, kuyakwenza ukuba ulwelwe luzive lukhululeke kwaye luqale ukukhula ngokukhawuleza. Nokuba unezityalo zendalo etankini, iiyure ezisi-8 zokukhanya ziya kuba ngaphezulu kokulingeneyo ukwenza inkqubo yefotosinthesisi. Xa ucima izibane, ndincoma ukuba ucime izibane kwigumbi kuqala emva koko nezibane ze-aquarium, ungazicimi zombini ngexesha elinye njengoko kunokubangela ukuba iintlanzi zakho zibe noxinzelelo okanye zoyike.
Ungalibali ukuba itanki kufuneka ukuba likhulu ngokwaneleyo, kuba igolide iyakhula ifike kwiisentimitha ezingama-30, ke asifuni ukuba bazive bevalelekile, okanye sifike kwindawo enabantu abaninzi apho izilwanyana zinokuqala khona ukugula okanye ezona meko ukufa.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ngeentlanzi » Amanzi akwariyam akwariyam » Iingcebiso zokwenza ukuba intlanzi yakho ihlale ixesha elide
Ndiwatshintshe kangaphi amanzi emanzini?
UAngela Graña sitsho
Molo, ndingumququzeleli weeblogi zezilwanyana. Uxolo, kodwa ababhali bezithuba ezindala bemkile, ngenxa yoko abaphenduli kwizimvo. Ndiza kuzama ukuphendula ngokusemandleni am.
Eyona nto ilungileyo yokwenza ngalo mbuzo kukujonga ukubonakala kwamanzi. Ngexesha eliqala ngalo ukubonakala lingcolile kufuneka ucinge ngokutshintsha. Ukuba ufuna ukuba ihlale ixesha elide, esona sisombululo sisiso kukuthenga indawo yokucoca amanzi, uhlala ukhumbula ukuba iintlanzi zakho ziyabanda okanye zishushu.
Ndiyathemba ukuba ndiye ndanceda.
Phendula ku-langela Graña